Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa mobilada LCD-ka oo leh shaashad shaashad shaashadda hoosteeda | Androidsis
Huawei wuxuu ka mid yahay halyeeyada usbuuca, ka dib soo bandhigida HarmonyOS, nidaamkaaga hawlgalka u gaarka ah. Dhanka kale, soo saaraha Shiinaha wuxuu sii wadaa inuu horumariyo taleefannadiisa. Nooca Shiinaha ayaa u isticmaalay dareeraha sawirka shaashadda shaashadda dhowr nooc oo moodello ah, gaar ahaan qeybta sare, laakiin tani waa wax ballaarin doona.
Ilaa hadda, waxaa loo isticmaalaa oo keliya dareeraha faraha ee ku dhejisan albaabbada OLED ama AMOLED. Laakiin noocyo dhowr ah, oo ay ku jiraan Huawei, ayaa qorsheynaya inay soo saaraan taleefannada leh guddi LCD ah oo leh aaladda sawirka faraha. Waxay umuuqataa in astaanta shiinuhu ay durba diyaarinayso soo bandhigida qaabkan.
Sumadda Shiinaha ayaa xirtay heshiis ay la gashay BOE, soo saare guddi, si tan looga dhigo suurtagal. Waxay umuuqataa inay sifiican udhaqaaqeen iyo in rubacii ugu dambeeyay ee sanadkaan soosaarida taleefankan uguhoreeyay ee nooca Shiinaha uu bilaaban doono. Marka Huawei wuxuu noqon lahaa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee leh aaladda sawirka faraha ee hoosta guddiga LCD.
Noocyo kale oo ku saabsan Android sidoo kale way ka shaqeeyaan ku dar dareeraha faraha ee hoosta guddiga qeybta LCD. Xiaomi waa mid kale oo iyaga ka mid ah, sida horeyba loogu dhawaaqay toddobaadyo ka hor. Laga soo bilaabo wixii aan ka arki karno in warshaduhu wax badan ka shaqeeyaan arrintan, iyo sannadka 2020 waxay noqon doonaan xaqiiqo.
Marka su’aashu waxay tahay calaamadee ugu horreysa kiiskan. In kasta oo ay u muuqato in Huawei mar horeba horumarsan tahay arrintan. Ma garanayno xilligan waxba kama jiraan taleefankan oo ah nooca Shiinaha waa diyaar. Xaqiiqdii waa tusaale ku dhex jira bartamaheeda.
Sidaa darteed, waxaan rajeyneynaa taas waxaa dhowaan soo baxaya warar dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda Huawei. Dareeraha sawirka shaashadda ka hooseeya ayaa xoogaa qaali ah, laakiin qollada LCD-ka ayaa ka jaban, sidaa darteed waxay kaa caawin kartaa in qiimaha taleefanka la heli karo mar walba. Waxaa jiri kara warar dheeraad ah toddobaadyo yar gudahood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei si ay u bilawdo taleefan LCD ah oo leh shaashad shaashad shaashadda hoosteeda
Mate 30 Lite wuxuu noqon doonaa taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee Huawei la leh HarmonyOS